PRB license & form
ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်ခ၊ လိုင်စင်ခ၊ ပိုးသတ်ဆေးအရည်အသွေးစစ်ဆေးခနှင့် ပိုးသတ်ဆေး ဓါတ်ကြွင်းစစ်ဆေးခများ
1. The applicants are requested to submit one application for each product to be registered.
2. Specified samples are required to submit along with the application as stated in the application form.
3. The application with incomplete information, absence of specified samples, analytical standards may delay the consideration for registration.
4. Payment of the registration fees must be made through the office of the Pesticide Registration Board. “The Pesticide Registration Board " will inform the amount of registration fees to be deposited and may issue an office memo to the treasury office requesting to receive such fees.
5. The decision of the Pesticide Registration Board will be notified to the applicant at its earliest convenience.
REGISTRATION FEES FOR VARIOUS TYPES OF REGISTRATION & USE PERMITS AS PRESCRIBED BY THE PESTICIDE REGISTRATION BOARD.
Experimental Registration : 1,000,000 Kyats for the period of two years.
Provisional Registration : 2,000,000 Kyats for the period of five years.
Full Registration : 5,000,000 K yats for the period of ten years.
Special Use Permit : 1,000,000 Kyats for the period of one year.
Amended Registration : 1,000,000 Kyats.
INQUIRIES SHOULD BE MADE TO THE CO-SECRETARY OF THE P.R.B
Telephone : 95-1-644214, 95-1-640459
Fax : 95-1-644019
E-mail : directorppddoa@gmail.com
PLF-1 (Application Form)
Data Requirement For Registration of Pesticide
ပြည်ပနိုင်ငံမှ ကုမ္ပဏီများ၊ ပြည်တွင်းမှ ကုမ္ပဏီများသည် တောင်သူများ၏ စိုက်ခင်းတွင် ကျရောက်သော ပိုးမွှား၊ ရောဂါ၊ ပေါင်းများနှိမ်နင်းရန်အတွက်လည်းကောင်း၊ လူသားများ၏ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေသော အိမ်တွင်းတွင်ကျရောက်တတ်သော အင်းဆက်ပိုးများကို နှိမ်နင်းရန်အတွက် အသုံးပြုသော ပိုးသတ်ဆေးများကို မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ တင်သွင်းရောင်းချလိုပါက ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာ နိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့တွင် မှတ်ပုံတင် လျှောက်ထားရပါသည်။ ကုမ္ပဏီများမှ မှတ်ပုံတင် လျှောက်ထား ရာတွင်-
(က) ပိုးသတ်ဆေးဥပဒေ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွင် ဖော်ပြထားသော ပုံစံ(၁) PLF(1) ဖြင့် လျှောက်ထားရပါ သည်။ ယင်းပုံစံကို ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့ တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူးရုံးခန်းတွင် ဝယ်ယူ ရရှိနိုင်ပါသည်။ ယင်းပုံစံတွင် ဖြည့်စွက်ကာ-
- မူရင်းလျှောက်လွှာ ၁စုံ၊ မိတ္တူ ၄စုံ
- သက်ဆိုင်ရာပိုးသတ်ဆေးထုတ်လုပ်သူ၏ သဘောတူညီချက်စာ မူရင်း ၁စုံ၊ မိတ္တူ ၄စုံ
- ပိုးသတ်ဆေးနှင့်ပတ်သတ်သည့် အချက်အလက်များ မူရင်း ၁စုံ၊ မိတ္တူ ၂စုံ
- အသုံးပြုရန်အဆိုတင်ပြည့် တံဆိပ်(အညွှန်းစာ) (၃)စုံ -(မြန်မာဘာသာပြန်ဆိုချက်ဖြင့်)
တို့ကို ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့ တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူးရုံးခန်းသို့လည်းကောင်း၊
- အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန် ပိုးသတ်ဆေးနမူနာ
- စက်ရုံထုတ်အဆင့်ရှိ အဆိပ်ရှိ ပစ္စည်းအပြင်း(များ)
တို့ကို ပိုးသတ်ဆေးဓာတ်ခွဲခန်းသို့လည်းကောင်း တင်ပြပေးပို့ရပါသည်။ သတ်မှတ်ထားသည့် ပိုးသတ်ဆေး ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးခအား ပေးသွင်းရပါမည်။ (ပိုးသတ်ဆေးတစ်မျိုးလျှင် မြန်မာငွေ ကျပ် ၃၀၀၀၀၀/-တိတိ ပေးသွင်းရမည် ဖြစ်ပါသည်။)
(ခ) မှတ်ပုံတင်ပေးပို့လျှောက်ထားလာသော လျှောက်လွှာနှင့် Document များအား တွဲဘက် အတွင်းရေ:မှူးရုံးခန်းမှ စီစစ်၍ သက်ဆိုင်ရာ နည်းပညာကော်မတီဝင်များသို့ ဖြန့်ဝေပေးပို့ပါသည်။
(ဂ) ပိုးသတ်ဆေးနမူနာကို ပိုးသတ်ဆေးဓာတ်ခွဲခန်းမှ အရည်အသွေးစစ်ဆေးပါသည်။
(ဃ) ပိုးသတ်ဆေးနှင့် ပတ်သက်သော နည်းပညာအချက်အလက်များကို သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲရှိ ဌာနစု များမှ နည်းပညာ ကော်မတီမှ အစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ကာ စစ်ဆေးပါသည်။
(င) ပိုးသတ်ဆေးဓာတ်ခွဲခန်းမှ အရည်အသွေးစစ်ဆေးမှုရလာဒ်နှင့် နည်းပညာကော်မတီမှ စိစစ် ထောက်ခံချက်များနှင့်အတူ ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့၊ နည်းပညာကော်မီတီအစည်းအဝေးများသို့ တင်ပြပါသည်။
(စ) ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့၊ နည်းပညာကော်မီတီအစည်းအဝေးမှ စိစစ်ထားသော ပိုးသတ်ဆေးများကို ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သို့ တင်ပြပါသည်။
(ဆ) ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့မှ အစည်းအဝေးပြုလုပ်ကာ စိစစ်ပြီး ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်ခွင့် ပြုပါသည်။ ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့မှ ပိုးသတ်ဆေးဥပဒေမှ ပြဌာန်းထားသော အောက်ဖော်ပြပါ ပိုးသတ်ဆေး မှတ်ပုံတင် အမျိုးအစားအတိုင်း မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုပါသည်။
- ယာယီ သုံးစွဲခွင့်မှတ်ပုံတင်
- အပြည့်အဝ သုံးစွဲခွင့်မှတ်ပုံတင်
- အထူးသုံးစွဲခွင့် မှတ်ပုံတင်
(ဇ) မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့မှ မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုသောပိုးသတ်ဆေးများကို သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများသို့ တွဲဘက် အတွင်းရေးမှူး မှ မှတ်ပုံတင်ကြေးများပေးသွင်းရန် အကြောင်းကြားစာ ထုတ်ပေးပါသည်။
(ဈ) အကြောင်းကြားစာရရှိသော ကုမ္ပဏီများ (ပြည်တွင်း/ပြည်ပ)သည် မှတ်ပုံတင်ကြေးများကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း ပေးသွင်းရပါသည်။ မှတ်ပုံတင်ကြေးနှင့် ပိုးသတ်ဆေး အရည်အသွေး စစ်ဆေးခနှုန်းထားများကို (၁၀.၃.၂၀၁၆) ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၆/၂၀၁၆) အရ ပေးသွင်းဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
(ည) ငွေပေးသွင်းပြီးကြောင်း အထောက်အထားရရှိပါက တွဲဘက် အတွင်းရေးမှူးမှ ပိုးသတ်ဆေး မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်ကို ထုတ်ပေးပါသည်။ ယင်းပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရရှိပြီးမှ ပိုးသတ်ဆေး တင်သွင်းခွင့် (Import Endorsement) ကို ထပ်မံလျှောက်ထားရပါသည်။
Process to grant the Pesticide Registration
Any companies (Foreign of local companies) desirous of importing formulated pesticide and active ingredients to control the agricultural pests or for domestic use shall apply the pesticide registration to the Pesticide Registration Board. An application in the prescribed from (PLF-1) shall be submitted the registration as the requirements as follow: -
Fill up the application form (PLF-1) payable with the respective fees.
Completed Application form one original +4copies
Letter of consent from manufacturer one original +4copies
One original and two copies of technical supporting documents
Three copies of proposal label with Myanmar translation will be submitted to PRB Co-secretary office and
Formulated product in sufficient amount for carrying out supervised trials and quality control of the product
25gms of technical active ingredient or ingredients will also be submitted to Pesticide Analytical Laboratory. (300000/- Kyats per one product)
The Co-secretary of Pesticide Registration Board office will check the completed application form and technical dossiers and will contribute to respective technical members.
The pesticide laboratory analyze and test pesticides or any active ingredient received as samples as to conformity with the content of ingredient as claimed on the label.
The technical committee under the Plant Protection Division evaluate the technical documents.
With the pesticide analytical results and the review on the technical documents the external technical meeting shall evaluate the pesticide.
According to the results of the evaluation the pesticide are submitted to the Pesticide Registration Board.
The Pesticide Registration Board make decision with respect to the application for the following type of registration
The Co-secretary of PRB issue the letter to the companies to deposit the respective registration fees in Myanmar Kyats.
After the finished payment the Co-Secretary of Pesticide Registration Board issue the registration certificate. Base on the pesticide registration certificate the companies shall apply the import endorsement at the Co-Secretary.
ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်ရန်လျှောက်ထားခြင်းအတွက် ဆောင်ရွက်ရန် အချက်များ
(၁) လျှောက်လွှာတွင် ဖြည့်ရပါမည်။
(၂) မိမိတင်သွင်းမည့် နိုင်ငံမှ ပိုးသတ်ဆေးထုတ်လုပ်သူ၏ ကိုယ်စားလှယ်လွှဲသည့် သဘော တူညီချက် စာ (Letter of Consent) ပါရပါမည်။
(၃) (Letter of Consent)အပါအဝင် မည်သည့် အကြောင်းအရာမဆို ကုမ္ပဏီ Letter Head ဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း လိပ်မူတပ်လျှက် ဆောင်ရွက်ရပါမည်။
Pesticide Registration Board
အထက်ဖော်ပြပါ ပြင်ဆင်သုံးစွဲခြင်းအား (၁. ၄. ၂၀၁၆)မှ စတင်၍ ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
(၄) သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီမှ ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်အား ဆောင်ရွက်မည့် ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းအမည်/ ရာထူး/ မှတ်ပုံတင်အမှတ်တို့ပါဝင်သည့် သက်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ၏ တာဝန်ရှိသူ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ ပါရှိရပါမည်။
(၅) လျှောက်လွှာဖြည့်ပြီးသား Original (၁)စုံ+ မိတ္တူ (၄)စုံ= စုစုပေါင်း(၅)စုံ ပိုးသတ်ဆေးနှင့် ပတ်သတ်သော Data အချက်အလက်များ မူရင်း(၁)စုံ+ မိတ္တူ (၂)စုံ= စုစုပေါင်း(၃)စုံ တင်ရပါမည်။
(၆) ပိုးသတ်ဆေးဓာတ်ခွဲခန်းသို့ သတ်မှတ်ထားသည့် ပိုးသတ်ဆေးနမူနာအား တစ်ပါတည်း ပေးပို့ ရပါမည်။ သတ်မှတ်ထားသည့် ပိုးသတ်ဆေးဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးခအား ပေးသွင်းရပါမည်။ (ပိုးသတ်ဆေးတစ်မျိုးလျှင် မြန်မာငွေ ကျပ် ၃၀၀၀၀၀/-တိတိ ပေးသွင်းရမည် ဖြစ်ပါသည်။)
(၇) လျှောက်လွှာ Data အချက်အလက်များ ပိုးသတ်ဆေးနမူနာစစ်ဆေးခြင်းများ ပြည့်စုံပါက ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့ အစည်းအဝေးသို့ တင်ရပါမည်။
(၈) အစည်းအဝေးမှ Approve ဖြစ်ပါက သတ်မှတ်ထားသော ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်ကြေး ပေးသွင်းပြီး Registration Certificate ထုတ်ပေးပါမည်။
(၉) ပိုးသတ်ဆေး တင်သွင်းခွင့် ဆက်လက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
(၁) Trade Name ပြောင်းလဲခြင်းအတွက် လျှောက်လွှာ မလိုပါ။
သက်ဆိုင်ရာဖော်စပ်ထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီ၏ သဘောတူညီချက်စာဖြင့် တင်ပြရန် ဖြစ်ပါသည်။
(၂) အဆိပ်ရှိပစ္စည်း (သို့) ဖော်စပ်ထုတ်လုပ်ပုံ ပြောင်းလဲလိုလျှင် Amended Registration အဖြစ် လျှောက်ထားရန်ဖြစ်ပြီး အပြည့်အစုံ ပြန်လည်တင်ပြရပါမည်။ (လျှောက်လွှာဖြည့်၍ ပြန်လည် တင်ပြရန်) (ပိုးသတ်ဆေး မှတ်ပုံတင်အမှတ်ရရှိပြီးပါက ထည့်သွင်းဖော်ပြရန်)
(၃) လျှောက်လွှာများတင်ပြီးပါက ဤရုံးမှ စစ်ဆေးလက်ခံပြီး ရရှိကြောင်း လက်ခံစာ ပြန်ပေး ပါသည်။ (လျှောက်လွှာတွင်)
(၄) ဤရုံးမှ မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားသော ပိုးသတ်ဆေးများနှင့် ပါတ်သတ်၍ လိုအပ်ချက်များ ရှိပါက အဆိုပါရုံးလက်ခံစာအမှတ်အား ရည်ညွှန်း၍ ပြန်လည်တင်ပြရန် ဖြစ်ပါသည်။
(၅) ကုမ္ပဏီမှ အဆိုပါရုံးလက်ခံစာအား လျှောက်လွှာတင်ပြီး တစ်ပတ်အကြာ(သို့) (၂-၃)ရက်အတွင်း ပြန်လည်လာရောက်ယူရန် ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ လက်ခံစာ လာမယူခဲ့ပါက ၄င်းနှင့် ပတ်သတ်သော ကိစ္စအဝဝများအား ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ယူ ဖြေရှင်းရန် ဖြစ်ပါသည်။
(၆) သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားရာတွင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသောနှစ်ထက် ကျော်လွန်၍ လျှောက် ထားလာခြင်းအား ကျိုးကြောင်း ဖော်ပြရှင်းလင်းချက်ဖြင့် ဖော်ပြရန်ဖြစ်ပါသည်။
(၇) သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်ထက် (၃)နှစ် ကျော်လွန် လျှောက်ထားခြင်းများအား အတွင်းရေးမှူး ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့ဖြင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး၍ အတည်ပြုရယူလျှောက်ထားရန် ဖြစ်ပါသည်။
လျှောက်လွှာတွင် ယခင်ထုတ်လုပ်ပေးခဲ့သော ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အမှတ် ဖော်ပြရပါမည်။
(၂) ဖော်စပ်ထုတ်လုပ်သူ/ နိုင်ငံ၏ သဘောတူညီချက်စာ (Original) (Letter of Consent) ပါရ ပါမည်။ ၄င်းစာတွင် Reg: No. ပိုးသတ်ဆေးအမည် ဖော်ပြရပါမည်။
(၃) ဤဌာနမှ ထုတ်ပေးခဲ့သည့် Reg: No. ထုတ်ပေးသော စာမိတ္တူ ပူးတွဲတင်ပြရပါမည်။
(၄) အကယ်၍ ဖော်စပ်ထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီ အပြောင်းအလဲရှိပါက ပြောင်းလဲကြောင်း အထောက် အထား စာရွက်စာတမ်းမိတ္တူ ပူးတွဲတင်ပြရပါသည်။
(၅) ပိုးသတ်ဆေးအမျိုးအစား ဖော်ပြရပါမည်။
(၆) လျှောက်လွှာဖြည့်ပြီးသား Original အပါအဝင် Copy(၄)စုံ (လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထား မိတ္တူများပူးတွဲလျက်) တင်ရပါမည်။
(၇) ပိုးသတ်ဆေးဓါတ်ခွဲခန်းသို့သတ်မှတ်ထားသည့် ပိုးသတ်ဆေး Sampleပေး၍ စစ်ဆေးရပါမည်။ သတ်မှတ်ထားသည့် ပိုးသတ်ဆေးဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးခအား ပေးသွင်းရပါမည်။ (ပိုးသတ်ဆေးတစ်မျိုးလျှင် မြန်မာငွေ ကျပ် ၃၀၀၀၀၀/-တိတိ ပေးသွင်းရမည် ဖြစ်ပါသည်။)
(၈) လျှောက်လွှာ၊ Data အချက်အလက်များ၊ ပိုးသတ်ဆေးနမူနာစစ်ဆေးခြင်းများ ပြည့်စုံပါက ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့အစည်းအဝေးသို့ တင်ပါမည်။
(၉) အစည်းအဝေးမှ Approve ဖြစ်ပါက သတ်မှတ်ထားသော ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်ကြေး ပေးသွင်းပြီး Registration Certificate ထုတ်ပေးပါမည်။
(၁၀) တင်သွင်းခွင့် ဆက်လက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
- လျှောက်လွှာတွင် Reg: No. ဖော်ပြရပါမည်။
- လျှောက်လွှာနှင့် ပူးတွဲ၍ စမ်းသပ်ကွက် ဆောင်ရွက်ပြီးစီ:မှု မိတ္တူစာများ တင်ပြရပါမည်။
- အားလုံးပြည့်စုံပါက လျှောက်လွှာ Original အပါအဝင် Copy (၄)စုံ တင်ပြရပါမည်။
(၂) လျှောက်လွှာ၊ စာရွက်စာတမ်းမိတ္တူများ ပြည့်စုံပါက မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့ အစည်းအဝေးသို့ ဆက်လက်တင်ပါမည်။
(၃) အစည်းအဝေးမှ Approve ဖြစ်ပါက သတ်မှတ်ထားသော ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်ကြေး ပေးသွင်းပြီး Registration Certificate ထုတ်ပေးပါမည်။
(၄) တင်သွင်းခွင့် ဆက်လက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
Registration For Formulation Licenses
၃။ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ဖော်ပြပါထုတ်လုပ်မှုနည်းစနစ် အကျဉ်း
(စွန့်ပစ်ရေများသန့်စင်ရေးနှင့် အခြားစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ သန့်စင် ရေးလုပ်ငန်းများ
၄။ ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင် ( သို့မဟုတ် ) အဆိပ်ရှိပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ၏ သဘောတူ
၅။ ဖော်စပ်မည့်ပိုးသတ်ဆေးများ၏ အညွှန်းစာ။
၆။ လက်မှတ်ရပိုးသတ်ဆေးသုံးစွဲသူများ သင်တန်းဆင်းပြီးကြောင်းလက်မှတ်
အိမ်တွင်းသုံးပိုးသတ်ဆေးများကို ဖော်စပ်ထုတ်လုပ်ရန်စက်ရုံ၊ အိမ်တွင်းမှုလုပ်ငန်းများအတွက် ပိုးသတ်ဆေး ဖော်စပ်ထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင် လျှောက်ထားရပါသည်။
(က) အသုံးပြုသည့် အဆိပ်ရှိပစ္စည်းသည် ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့တွင် မှတ်ပုံတင် ခွင့်ပြုမှု ရရှိပြီးဖြစ်ရမည်။
(ခ) ဖော်စပ်ထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းသည် ပိုးသတ်ဆေးများကို အန္တရာယ်ကင်းစွာ ဖော်စပ်၊ ထုပ်ပိုး၊ သိုလှောင်ရန် လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်း လိုက်နာရမည်ဖြစ်သည်။
(ဂ) ပိုးသတ်ဆေးဖော်စပ်ထုတ်လုပ်မည့်လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်မည့်ကုမ္ပဏီသည် ဖော်စပ်မည့် ပိုးသတ်ဆေး တစ်ခုချင်းအလိုက် လျှောက်လွှာပုံစံတွင်ဝယ်ယူဖြည့်စွက်ရပါသည်။ လျှောက်လွှာ နှင့်အတူ
- ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ဖော်ပြပါထုတ်လုပ်မှုနည်းစနစ် အကျဉ်း (စွန့်ပစ်ရေများသန့်စင်ရေးနှင့် အခြားစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ သန့်စင် ရေးလုပ်ငန်းများ အပါအဝင်)
- ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင် ( သို့မဟုတ် ) အဆိပ်ရှိပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ၏ သဘောတူ ညီချက်
- ဖော်စပ်မည့်ပိုးသတ်ဆေးများ၏ အညွှန်းစာ
- လက်မှတ်ရပိုးသတ်ဆေးသုံးစွဲသူများ သင်တန်းဆင်းပြီးကြောင်းလက်မှတ်
(ဃ) တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူးမှ ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့ နည်းပညာကော်မတီများ ပါဝင်သော စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကို ဖွဲ့ပေးကာ စက်ရုံကို စစ်ဆေးစေခဲ့ပါသည်။
(င) ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိမှုအခြေအနေကို ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူးမှ စိစစ် ပြီးခွင့်ပြုပါက သတ်မှတ်ထားသော လိုင်စင်ကြေးကို သတ်မှတ်ထားသည့် နည်းလမ်းအတိုင်း သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီမှ ပေးသွင်းပြီးလိုင်စင်ထုတ်ပေးပါသည်။
Requirements for Formulation License;
2. Brief description of technological process including decontamination of waste and other discharge of the plant;
3. Number of registration or amended registration, if any, of pesticide;
4. Written consent of the patent owner of pesticide or manufacturer of the active ingredient;
5. Certified Pesticide Applicator Identity Card;
6. Label of formulated products;
Formulation License Process;
The Pesticide used in Formulation shall be registered in Pesticide registration board;
The Companies desirous of Formulation license shall be submitted, the application form as the requirement as follow;
Brief description of technological process including decontamination of waste and other discharge of the plant;
Number of registration or amended registration, if any, of pesticide;
Written consent of the patent owner of pesticide or manufacturer of the active ingredient;
Certified Pesticide Applicator Identity Card;
Label of formulated products;
The Co- secretary of Pesticide Registration Board Office organizedatechnical committee and technical committee members will makeafield inspection at Factory.
The Co- secretary will evaluate the field inspection report and will summit to the Pesticides Registration Board.
After the Pesticide Registration Board makeadecision, the company has to pay license fees as issue of Pesticide Registration Board.
After payment advice the Secretary of Pesticide Registration Board issue the license.
List of Formulation Licenses
Registration for Fumigation License
၂။ ပိုးသတ်မှိုင်းတိုက်ရာတွင် အသုံးပြုမည့် ပစ္စည်းကိရိယာများ စုဆောင်းထားရှိမှုစာရင်း။
၃။ လက်မှတ်ရပိုးသတ်ဆေးသုံးစွဲသူများ သင်တန်းဆင်းပြီးကြောင်းလက်မှတ်။
ပိုးသတ်ဆေးဥပဒေ ပုဒ်မ(၁၇) ပုဒ်မခွဲ(က)အရ ပိုးသတ်မှိုင်းတိုက်ခြင်း လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရန် လိုအပ်သည့် ပြည်ပပို့ကုန်များ၊ သိုလှောင်သီးနှံများကို ပိုးသတ်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ ဂိုဒေါင်များ၊ အဆောက်အဦးများနှင့် လူနေအိမ်ဝန်းကျင်များ၊ သယ်ဆောင်ယာဉ်နှင့် ကုန်သေတ္တာများတွင် ပိုးသတ် မှိုင်းတိုက်ခြင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သည့် ကုမ္ပဏီများကို လိုင်စင်ထုတ်ပေးပါသည်။
(က) ပြည်ပပို့ကုန် ပိုးသတ်ရာတွင် အသုံးပြုသော ပိုးသတ်ဆေးသည် ပိုးသတ်ဆေး မှတ်ပုံတင် အဖွဲ့တွင် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုချက် ရရှိပြီးဖြစ်ရမည်။
(ခ) လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်မည့်ကုမ္ပဏီများသည် လျှောက်လွှာပုံစံကို တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူးရုံးခန်းတွင် ရယူ ဖြည့်စွက်ပြီး လျှောက်လွှာနှင့်အတူ
- ပိုးသတ်ရာတွင် အသုံးပြုမည့် ပစ္စည်းကိရိယာများ စုဆောင်းထားရှိမှုစာရင်း၊
- လက်မှတ်ရ ပိုးသတ်ဆေးသုံးစွဲသူ အသိအမှတ်ပြု ကဒ်ပြား(CPA) တို့ကို ပူးတွဲ တင်ပြ ရပါသည်။ (သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက် မကျော်လွန်ရပါ)
(ဂ) တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူးမှ ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့ နည်းပညာ ကော်မတီဝင်များ ပါဝင် သောအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းပေးကာ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးစေပါသည်။
(ဃ) ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှုအခြေအနေကို ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့ တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူးမှ စိစစ်ကာ ခွင့်ပြုပါက သတ်မှတ်ထားသော လိုင်စင်ကြေးကို သတ်မှတ်ထားသော နည်းလမ်း အတိုင်း သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီမှပေးသွင်းပြီး လိုင်စင်ထုတ်ပေးပါသည်။
Requirements for Fumigation License;
2. Receipt for payment of license fee (original);
3. Lists of Materials used for Fumigation
4. Certified Pesticide Applicator Identity Card;
Fumigation License Process;
The Pesticide used in fumigation shall be registered in Pesticide registration board;
The Companies desirous of fumigation shall be submitted, the application form as the requirement as follow;
Questionnaires to the person wishing to conduct pesticide treatments for export commodities and pest control
list of materials used for fumigation and pest control
the copy of pest certificate of systematic handling and use of pesticide (CPA). (Not be expired)
The inspection team concerned the technical committee member by Co-Secretary and field inspection.
According to the report of inspection team, the Co-secretary evaluate and allow to company for license.
After payment for license fees, issue the license to the company.
List of Fumigation Licenses
Registration for Repacking License
(၂) ထည့်သွင်း/ ထုပ်ပိုးပစ္စည်း နမူနာနှင့် တံဆိပ် (အညွှန်းစာ)များ။
(၃) ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်ခွင့်ရရှိထားသူနှင့် ထုတ်လုပ်သူ၏ သဘောထားတူညီချက်စာ။
(၄) လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ ၏ပိုးသတ်ဆေးကိုင်တွယ်သုံးစွဲခွင့်လက်မှတ်မိတ္တူနှင့် ရှေးဦးသူနာပြုနည်းများ ဖြေဆိုအောင်မြင်ကြောင်း ထောက်ခံချက်။
(၅) ပြန်လည်ထုပ်ပိုးခြင်းလုပ်ငန်းအတွက်အသုံးပြုမည့် ပစ္စည်းကိရိယာများစုဆောင်းထားရှိမှုနှင့် စက်ရုံဝန်ထမ်းများ၏ ကျန်းမာရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အန္တရာယ်ကင်းစေရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ထားရှိမှု။
(က) လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်မည့် ကုမ္ပဏီများသည် လျှောက်လွှာပုံစံကို သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲတွင် ရယူ ဖြည့်စွက်ပြီး လျှောက်လွှာနှင့်အတူ လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များ ပူးတွဲလျှက် တင်ပြ လျှောက်ထား ရပါသည်။
(ခ) တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူးမှ ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့ နည်းပညာကော်မတီဝင်များပါဝင်သောအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းပေးကာ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးစေပါသည်။
(ဂ) ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံစာကို တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူးမှ စိစစ်၍ ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင် အစည်းအဝေးသို့ ဆက်လက်တင်ပြပါသည်။
(ဃ) ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အစည်းအဝေးတွင် အတည်ပြုဆုံးဖြတ်၍ ခွင့်ပြုပါက သတ်မှတ်ထားသော လိုင်စင်ကြေးကို သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲတွင် ပေးသွင်းစေပြီး ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူးမှ လိုင်စင်ထုတ်ပေးပါသည်။
Requirements for Repacking License;
(1) Receipt for payment of license fee (original)
(2) The sample of containers packing materials and their labels (instructions)
(3) The consent of the holder of registration and manufacture of the holder of registration and manufacture of the pesticide.
(4) Certificate regarding the safe handling and distribution of pesticides and first aid methods.
Repacking License Process;
List of Repacking License
Force 10 EC
Demon 1.8 EC
Azephte 75 SP ,ETC…
Pi Ti Pyae ZonCo., Ltd
အမှတ် (၃၀)၊ ရွှေမြို့တော်စေတီလမ်း၊ ရန်ကုန်၊ စက်မှုဇုန်၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်။​
Reg Date – 30-10-2014
Exp. Date- 29-10-2017
​Lambda cyhalothrin 2.5EC
Chlorpyrifos 40% EC , ETC…
​Farm Link Co.,Ltd
အမှတ် (၉၀၊ ၉၁၊ ၉၄)၊ ဦးရွှေအိုးလမ်းနှင့် ဦးမှိုလမ်းထောင့်၊ ဇုံ (၃)၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။
Reg Date – 29-1-2015
Exp. Date- 28-1-2018
Registration for Whole/Retail sale pesticide license
လက်လီ/ လက်ကားရောင်းချခွင့် လိုင်စင်လျှောက်ရန်လိုအပ်ချက်များ
၂။ လက်မှတ်ရပိုးသတ်ဆေးသုံးစွဲသူများ သင်တန်းဆင်းပြီးကြောင်းလက်မှတ်။
လက်လီ/ လက်ကားရောင်းချခွင့် လိုင်စင်ထုတ်ပေးမှု လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်
၁။ လက်လီ/ လက်ကားရောင်းချခွင့် လိုင်စင် လျှောက်ထားရာတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် လျှောက်လွှာတွင် လိုအပ်သည့်အချက်အလက်များ ပြည့်စုံစွာဖြည့်စွက်၍ သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်ဦးစီးမှုးရုံး စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနတွင် လျှောက်ထားရမည်။
၂။ ခရိုင်ဦးစီးမှူးမှ စိစစ်၍ လိုင်စင်ခွင့်ပြုပါက သတ်မှတ်ထားသည့် လိုင်စင်ကြေးကို ပေးသွင်းစေပြီး လိုင်စင်ထုတ်ပေးပါသည်။
Requirements for Whole/Retail sale of pesticide;
Receipt for payment of license fee (original).
Copy of pass certificate of systematic handling and use of pesticide.
The Procedure of Whole/Retail sale pesticide license;
The companies desirous of Whole/Retail sale pesticide license shall be submitted the completed application form to district office Department of Agriculture
The district officer will evaluate the completed application form with requirements and makeadecision.
After decision company has to pay license fees.
After payment advice the district officer issue the license.
Status of Allowed Active Ingredient in Myanmar up to 2016
Lists of Banned Pesticides and Restricted Pesticides